मालागिरी तीन बहस - मालागिरी समाचार
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ११:४०
Home›अन्य›बकश›मालागिरी तीन बहस
मालागिरी तीन बहस
जि घायल, विगत दुई दशकदेखि बिजौरीमा बसी इलेक्ट्रोनिक पसल गर्दै आउनु भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ का घायलसंग गरिएको कुराकानी मालागिरी बहसमा ।
१. किन यो पेशा रोज्नुभयो ? कस्तो छ अ हिले यो पेशामा आम्दानी ?
– मैले घरमा बिग्रिएका रेडियो टिभी पहिलेबाट नै बनाउने गर्थे । सानैदेखि यसमा ज्ञान भएकोले अनि समयको पनि माग थियो उतिबेला सबैले पसल खोल्नुस् तपाईलाई ज्ञान पनि छ राम्रो सँग चल्छ भन्नुभयो त्यसपछि मैले यो पेशा रोजेको हुँ । अहिलेसम्म राम्रो छ सबैले बिश्वास गर्नुहुन्छ ।
२. के के चिजको सुविधा छ यहाँ ? सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ?
– अहिले नयाँ एवम् पुराना सबै किसिमका इलेक्ट्रोनिक सर–सामानहरु उपलब्ध छन् । साथै यहाँ मैले बिग्रिएका टिभी, रेडियो, घडी लगायतका सबै इलेक्ट्रोनिक चिजहरुको मर्मत पनि गर्दै आईरहेको छु । अहिलेसम्म म सन्तुष्टि नैं छु । सेवा ग्राहीहरु आउनुहुन्छ यहाँवाट सेवा लिई खुसी हुनुहुन्छ ।
३. के कस्ता चुनौतीहरु छन् यो क्षेत्रमा ? आफु टिकिरहन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
– यो क्षेत्र चुनौतीहरुको भण्डार भएको क्षेत्र हो त्यसैले धेरै चुनौतीहरु छन् । कसैको सामान कतै हराउला कि भन्ने डर केही बनाउदा बनाउदै बिग्रिन्छ कि भन्ने डर मानिसहरु सबै एकैनासका हुँदैनन् डरभित्र नै चुनौती छ धेरै । अब यो क्षेत्रमा टिकिरहनका लागि ईमानदारीका साथमा काम गर्न जरुरी छ । साथै सबैको बिश्वास जित्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ यसो गरियो भने यो क्षेत्रमा टिक्न सकिन्छ।
सुस्मिता अर्याल, बिगत लामो समयदेखि साहित्य क्षेत्रमा लागि यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा लागिरहनु भएकी धादिङकी हाल काठमाडौं बानेश्वरकी अर्यालसंग गरिएको कुराकानी मालागिरी बहसमा ।
१. साहित्य के हो जस्तो लाग्छ ? किन साहित्य लेख्न थाल्नुभयो ?
– साहित्य मनको सुख, दुःख पोख्ने एउटा अति नै उत्तम बिधा हो । साहित्यले नै अहिले मानिसलाई चेतनशील अनि समाजप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाईरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । मैले कक्षा ९ मा पढ्दा देखिबाट साहित्य लेख्न थालेको हुँ किनकि मलाई यसबाट सन्तुष्टि मिल्छ ।
२. साहित्य लेखनमा अहिले उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ कस्तो लाग्छ ? यो राम्रो पक्ष कि नराम्रो पक्ष हो ?
– अहिले केही वर्ष यता बिद्यमान नेपाली साहित्य समाजमा लेखकहरु धेरै जन्मिनु भएको छ तर हामीले संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा लेखनमा वृद्धि गर्न सक्यौं भने प्रभावकारी होला । लेखकहरु बढ्नु भनेको राम्रो पक्ष हो तर लेखकहरुको गुणात्मक रुपमा वृद्धि भयो भने अझै राम्रो हुने थियो होला ।
३. साहित्यमा देखिएको विकृतिलाई कसरी लिनुभएको छ ? यसलाई हटाउन के गर्नुपर्ला?
– यसको मुख्य कारण भनेको साहित्यमा भएको गुट उपगुट हो । जबसम्म साहित्यमा गुटको अन्त्य हुँदैन तबसम्म विकृति हट्दैन होला । अब यसलाई हटाउनका लागि साहित्यलाई माया गर्ने सबै साहित्यप्रेमीहरु एक हुन जरुरी छ। साहित्यमा देखिएको गलत सोच र गलत विचारलाई हटायौँ भने साहित्य क्षेत्र अझै फराकिलो हुने थियो कि ।
मुकेश नेपाली, विगत लामो समयदेखि ड्राइभि ङ गर्दै आउनु भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ निवासी नेपाली सँग गरिएको कुराकानी मालागिरी बहसमा ।
१. किन यो पेशा नै रोज्नुभयो ? कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ आफ्नो पेशामा ?
– हुन त भन्नेहरूले ड्राइभिङ पेशालाई तल्लो स्तरको पेशा भन्छन् तर मलाई ड्राइभर बन्ने र गाडीहरु बाटोमा गुडाउने सानैदेखि रुचि भएकोले मैले यो पेशा अङ्गालेको हुँ । सन्तुष्टि छु अहिले ।
२. यो पेशा निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्छन् नि ? कहाँ कहाँ गाडी चलाउनु हुन्छ ?
– पक्कै पनि यो पेशा निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । मानिसहरु हामीहरूलाई भगवानको दर्जा पनि दिनुहुन्छ । हरेक मोडमा हरेक घुम्तीमा हामीहरुलाई हाम्रो भन्दा पनि यात्रुहरुको बारेमा सोच्छौँ र पूरा ईमान्दारीका साथ गाडी चलाउछौँ । हामी कहिले आप्mनो कर्तव्यबाट बिमुख हुँदैनौँ किनकी हामीहरुलाई यात्रुहरूको बढी ख्याल हुन्छ । अहिले म तुलसीपुर डिलक्स चलाउछु जुन गाडीले दाङ काठमाडौं गर्छ ।
३. कत्तिको गाह्रो छ यो पेशा ? के ड्राइभिङ गरेर बाच्न सकिन्छ त ?
– गाह्रो त निकै गाह्रो छ खाने र सुत्ने समय नै राम्रोसँग मिल्दैन कहिले रातभरी त कहिले दिनभरी एकछिन पनि नरोकि गाडी चलाउनुपर्छ। अहिले आएर ड्राइभिङ गरेर बाँच्न सक्ने बाताबरण बनेको छ । मेहनत गरे अनुसारको पारिश्रमिक मिल्छ पहिले धेरै कम पैसामा पनि काम गरियो अहिले सम्झिदा बिगत दुःख लाग्छ अहिले नयाँ नीति आएको छ जसले गर्दा हामी काम गरेर खानेहरुलाई सहज भएको छ ।
सवा चार करोडमा “गाउँपालिकाको भवन” बन्दै, गाउँपालिका ...